किन राखिन्छ सिरानीमुनि लसुन ? - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
किन राखिन्छ सिरानीमुनि लसुन ?
लसुन विश्वको धेरैजसोे भान्सामा प्रयोग हुने मसला हो । खानालाई स्वादिष्ट बनाउँन बाहेक लसुनलाई केही घरेलू उपचारमा पनि प्रयोग गरिँदै आएको छ । लसुनको केही परम्परागत महत्व छन्, जसले नकारात्मक शक्तिलाई भगाउन सक्छ ।
लसुनबाट धेरै क्यालोरिज पाइन्छ । सय ग्राम लसुनमा सयभन्दा बढी क्यालोरी पाइन्छ । त्यस्तै लसुनमा कार्बोहाइड्रट र प्रोटिन प्रसस्त मात्रामा पाइन्छन्, जसले हाम्रो शरीरिक तथा मानसिक दुवै स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ ।
लसुनमा खनिज, सोडियम, पोटासियम तथा म्याग्नेसियम र भिटामिन–बीको मात्रा बढी रहन्छ । यसबाहेक लसनमा ‘एलिसिन’ नामक तत्वको पनि मात्रा पनि बढी हुन्छ ।
लसुनले संक्रमण तथा अपच र श्वासप्रश्वाको समस्यालाई ठिक पार्छ । लसुनमा पाइने ‘एन्टिअक्सिडेन्ट’ र ‘एन्टी–इन्फ्लामेटोरिज’ले मृटुलाई स्वास्थ्य राख्छ । लसुनले शरीरमा रहेको कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्छ र शरीरमा रक्तचाप प्रक्रियालाई ठिक र नियमित गराउँछ । लसुनले एन्टिबायोटिकभन्दा राम्ररी जीवाणुहरु मार्न सक्छ ।
सिरानीमुनि लसुन राख्नुको आफ्नै पुरानो मान्यता छ । लसुनले मिठो निन्द्रा लगाउँछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसले बिशेषगरी त्यस्ता व्यक्तिलाई फाइदा गर्छ, जसलाई निन्द्रा पर्न गाह्रो हुन्छ ।
लसुनको सल्फरयुक्त यौगिक र कडा सुगन्धको शान्त प्रभावले मिठो निन्द्रा लगाउँछ । एक पटक प्रयाग गर्नुहोस्, यो तरिका तपाई यसको असर थाहा पाउँनुहुनेछ । त्यस्तै, सिरानीमा लसुन राख्नाले हामीमा दिनभरी सकारात्मक प्रभाव पार्नका साथै अर्को दिनको लागि रातभर ऊर्जा संकलन गर्छ । सुरु सुरुमा लसुनको सुगन्धले केहीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ तर नियमित यसरी सिनारी मुनी लुसन राख्नाले बानी पर्छ र यसको बास्नाले राम्रो निन्द्रा पर्छ।
त्यस्तै, मिठो निन्द्रा लगाउँन लसुनलाई अर्को तरिका पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । एक गिलास दुधमा एक पोटी लसुनलाई ट्क्राएर उमाल्नुहोस् । तीन मिनेटसम्म उमालेपछि सेलाउँन दिनुहोस् । अब एक चिनी चम्चा मह दुधमा मिसाएर पिउँनुहोस् । यद्यपि, राम्रो प्रभावका लागि तपाईले सुत्न ३० मिनेटअघि पिउँनुपर्ने हुन्छ ।
तातोपानीमा नुन मिसाएर खानुका १० फाईदा
तामाको भाँडोमा राखेको पानी पिउँदाका फाइदा
बाँस ‘घाँसको राजा’
बोझोलाई संस्कृतमा ‘बचा’ नामले चिनिन्छ
कपाल लामो बनाउने उपाय
मेवाको पातको जूसले बचाउँछ ज्यान
अनुहार चम्किलो बनाउने उपाय